Marka aad qabtid oo dhan waa dubbe, Isis u eg dhidib - Rule News
Marka aad qabtid oo dhan waa dubbe, Isis u eg dhidib
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Marka aad qabtid oo dhan waa dubbe, Isis u eg dhidib” waxaa qoray Hal 90210, waayo theguardian.com on Friday 20 November 2015 12.35 UTC
Marka aad qabtid oo dhan waa dubbe, wax walba oo uu bilaabo inuu u eg dhidib. Sidaas awgeed, ma yaab leh in marka qof walba iyo eygoodii iyagoo iska soo booda kor ku derbi la fikrad dilaaga sidii aad ula macaamilo Isis a, oo dhan waxay u muuqdaan in ay soo jeedin badan wax la mid ah waxay had iyo jeer ay qabanayaan samaynaya.
Tusaale ahaan, haddii aad tahay qareen copyright a, markaas jawaabta cad oo ku lug leh oo isticmaalaya sharciga copyright. Maxaa yeelay, Isis waxaa laga yaabaa in ku faraxsan yahay inuu ku gowracaa kun, laakiin waxay ogaadaan in guriga-dhejinta waa dilay music.
Paul Rosenwig, aasaasaha shirkadda talinta ammaanka dalkiisa Red Branch, uu leeyahay qorshe lagu daabacay. "Waa maxay, haddii wax, waxaa la samayn karaa si ay ugu qasbaan in ay bixiyayaasha dejiyo xisaabaadka marka ay diidan in ay sidaa sameeyaan si iskood ah? Jawaabtu, in maskaxdayda, been in isbarbardhig si Act Digital Millennium Copyright (DMCA)."
Waad og tahay, DMCA, sharciga American oo, ha noqon daacad ah, ma gebi ahaanba guulaha gebi ahaanba ka saareen content sharci darrada ah ka internet-ka oo sidaas daraaddeed waxaa laga yaabaa in aanay noqon gabal model sharciga ah maraan biyaha halis ah kormeer dawladeed ee internet-ka.
fikrad Rosenwig waa xarrago, hab. Haddii aadan heli karin qof ku soo dejiyo dacaayad Isis si iskood ah, ka dibna waxa ay ka dhigi si sii si ay u marti waa dembi. Laakiin ma ahan oo keliya wax dambi ah - dembi ka soo horjeeda sharciga copyright, sort ugu xumaa ee dambiyada internet-ka, waxaa laga yaabaa in.
Uu soo jeedinta uu oggolaan in a-xisbiga saddexaad ee dawladda-xayirayo inay sheegan copyright on content kasta oo xiriir la leh urur argagixiso, ka dibna dab off gaar ogeysiisyada ay qaadan-down.
Hubaal ... hubaal waxaa jira xal sahlan yahay in?
Waxaan nahay ciidan. Waxaan nahay dad badan. Waxaan marnaba qeybiso aad quusan
Anonymous dhab ahaan rajeynayo si. Waxaa la soo qaaday hadal haynta dubbe / dhidibkii Ajashiisii ​​kale: marka dubbihii aad leedahay waa "xoogga arsing hareeraha internet-ka", ka dibna waxaan rajeynayaa in aad ka adkaan karaan ciidamada argagixisada caalamiga ah by arsing agagaarka hab dhab ahaantii si dhab ah lala beegsaday.
Ka dib markii ayidaya "dagaal" la Isis maalmaha soo socda weeraro Paris, wadareed hacktivist uu lahaa qaar ka mid ah guulaha la taaban karo ee la dagaalanka dacaayad Isis online.
A boqol oo kun xisaab twitter ayaa lagu qaadi iyo shan kun oo videos YouTube sheegay in, oo markii danbe laga saaray by, adeegga, tan iyo cyberwar waxay bilaabeen in January. More muran, Anonymous ayaa sidoo kale loo qaaday duqeynaya internetka ee kooxaha Isis xiriir la-leh diidmada qaybiyey weeraro adeegga, in dadaal lagu doonayo in iyaga offline garaacayaa.
Waa doodi immisa dadaalka sida dhab ahaan ka caawin dhaqdhaqaaqa weyn ka dhanka ah Isis, laakiin qadarka dadaal Anonymous waxaa gelinaya dhinaca sababta waa mid cajiib ah.
Laakiin qof kasta oo aan ku lug Anonymous si buuxda heegan ah in ay fuushan dunida ka mid ah argagixisada. Qaar ka mid ah dhiiranahay labaad: lulz ah. Waa kuwee sharax laga yaabaa in xeelad ugu dambeeyay soo jeediyay. Anonymous qorsheeyay in ay ka cadhaysiin Isis waa in la dilaa by Rick Rolling iyaga.
tallaabo Our socda: ogola qashin xaqiijin hashtags ISIS la rickrolls. sii daayo doonaa liiska sida ugu dhakhsaha badan waxaa la cusboonaysiiyaa.
- #OpParis (@opparisofficial) November 18, 2015
Marka la eego qdo dareenka kooban ee qof kasta badan kuwaas oo waqti badan internet-ka kharash gareeya - Hal 90210 waxaa ka mid ahaa - qorshuhu yahay oo ku saabsan sida ay u badan tahay in ay arkaan kuwo mira dhal sida fikrad copyright cajiib Red Branch ee. Laakiin waxaan idiin soo gudbin doonaa taariikhda.
31494	0 Anonymous, Qodobka, Blogposts, jabsiga, Hal 90210, Internet, State Islamic, filter spam, Technology, news World
← Ma u qalantaa iibsan aamusan a, fanless PC? Nabad gelyo gaarka ah, hello 'Alexa': Amazon Echo, robot guriga kuwaas oo ku wada maqli →